Ukuqokelelwa kwe-Sretsis SS18 kunika i-Jolt ye-Romanticism engaphezulu
Ukuzivelela kwakhona kwe-retro! Ukuqokelelwa kwe-Sretsis SS18 kunika i-Jolt ye-Romanticism engaphezulu
Omangalisayo! U-Esé Azénabor Utyhila ingqokelela yeRomy
Fi-ashion brand Sretsis yasungulwa ngonyaka ka-2012 yibhanti yoodade abathathu Pim, Kly kwaye Matina. Igama Sretsis Isenokuvakala ingeyonto ingaqhelekanga kodwa iingoonina abpelwe ngasemva. Ikhefu lokuqala leleyibhile kwintengiso yase-US lafika nini Paris kwaye UNicky Hilton babefotwe benxibe isinxibo samaqhiza esineqhosha lophawu kwaye ukusukela ngoko ileyibheli iyaqhubeka ukuqatshelwa kwaye yakhankanywa kwihlabathi jikelele kwiimagazini ezifana neVogue, Elle, Instyle kunye neqela labanye. Iingubo ezivela kwilebheli zinxitywe zezinye izithethi ezifana Beyonce kwaye Zooey Deschannel.
Inye into ekhethekileyo malunga nelebheli ijolise kuyo kukwazi kwihlabathi liphela ngoqulunqo lwayo kunye nokusetyenziswa kweendlela ezahlukeneyo ukwenza iziqwenga ezibukeka kakuhle ngokuchwetheza okungabalulekanga. Ukuqokelelwa kwabo kwentwasahlobo / ihlobo lowama-2018 ngokuqinisekileyo kunqumle kule ngcinga ingentla njengoko ibonakalisa ixesha eliqukayo lokuqulatha ukusuka kwiminyaka engama-40 ukuya kwengama-90 ngesimo sanamhlanje. Ngokwilebhile, ekudaleni olu qokelelo babecinga ngobuhle bothando, ngenxa yoko iintyatyambo ezinomboko zinobushushu obukhulu.
Rhoqo bathi, uBomi bulingisa ubuciko kodwa bube kwi-Sretsis Spring - Ihlobo le-2018, umlawuli wokudala onobuhlobo, wayenothando kwiingqondo zethu. Isimo sokuhlala sibakho esikhanyayo kwi-sretsis, yonke iminikelo ifumene uthando olongezelelekileyo lothando oluqokelelene nengqokelela yeemvakalelo ezintle. Ukusuka kwi-40 yengubo ephefumlelweyo yaseMelika e-beachana, yenza-kuhle (ukwenzela ukwenza okuhle!) Amayunifomu e-scout amantombazana, izinto eziphambili zehlobo kwiindwangu zendalo ezifakwe ngolwimi lweentyatyambo kunye neenyosi ezisasaza ngovuyo i-blooms kwaye okokugqibela umnikelo we-saccharine weengubo ezimibalabala ezenziwe nge-chiffon ; Ngentwasahlobo-ehlotyeni i-2018 sine-buzzing ngokuqinisekileyo kunye nomnqweno onamandla wokuthumela i-vibes elungileyo.
I-ROS-TITED ROMANTICISM | Jonga incwadi
Umthombo: I-Pinterest, IG | Umhle uValentina
uyilo lweklasikhi uyilo ifashoni uyilo lwe-retro ingqokelela ye-sretsis i-sretsis intwasahlobo-ehlotyeni i-2018 Ifashoni yehlabathi
UJessica Agorye Aprili 26, 2018
Yiyo Yonke Imalunga Nobushushu njengoko u-Andrea Iyamah ekhupha intwasahlobo yakhe / ihlobo lasehlobo